Usoro ndị na-aga nke ọma maka Mmasị Ahụhụ | Martech Zone
Anyị dere banyere ShortStack n'oge gara aga na taa ha zigara ihe ederede mara mma na infographic na-enye aka. Nwere ike ịkọwa ụzọ kachasị mma iji kpalie ndị ọrụ iji kpalite ọrụ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị? Got nwetara ya: n'asọmpi! Nke ahụ bụ ihe ShortStack achọtara mgbe ha mere nyocha nke ihe karịrị ndị ọrụ 800. (PS: Nke ahụ bụ njikọ njikọ anyị)
Nsonaazụ ahụ atụghị anyị n'anya - n'ihi na anyị na-ahụ kwa ụbọchị ka asọmpi nwere ike isi nwekwuo Mmasị ma kpalie ịkekọrịta. Ihe juru anyị anya bụ na 38% nke ndị zaghachiri bụ ndị sonyere na nyocha anyị emebeghị asọmpi. Site n'ụzọ, foto weere nke abụọ na asọmpi ahụ na isiokwu mgbidi were nke atọ.
Somefọdụ nchoputa ndị ọzọ:
72% nke ndị zaghachirinụ na-eche na ha nwere ike ime ka mma ha na mgbasa ozi mgbasa ozi ha
51% anwaala mmegharị foto
62% were kọmpụta kọstọm ịrata ndị na-agba ha
14% nke ndị ọrụ na-eji vidiyo maka asọmpi ha
Naanị nzaghachi m gbasara infographic a bụ na ekwenyere m okwu a tinye aka a na-eji ntakịrị oke loosely. Ahụrụ m okwu a n'anya rata ọtụtụ ihe. N'uche m, itinye aka na azụmaahịa, ọ bụghị naanị ịnweta ihe ma ọ bụ ihe na-eso dị ka mgbanwe maka ụdị ụgwọ ọrụ.
Nchọpụta ndị a ka dị mkpa, n'agbanyeghị! The azum nwere ike ụgbọala ọzọ okporo ụzọ na mmata ka gị ika… ebe ị pụrụ itinye na-ege ntị ma ọ bụ obodo n'ihu.
Tags: n'asọmpitinye ndị ọrụnjikọ akaụràinfographicmmegharị fotoobere akpaọrụ